Kooxda Manchester United oo la soo wareegeysa Pedro – Gool FM
Kooxda Manchester United oo la soo wareegeysa Pedro
(Manchester) 22 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay la xiriirtay naadiga Fluminense si ay ugala xaajooto qaabkii ay kula soo wareegi lahayd weeraryahanka reer Brazil ee kooxdaas, Pedro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
21-sano jirkaan ayaa dhaliyey 17 gool 50 kulan uu u saftay tartammada oo dhan kooxda Fluminense.
Weeraryahankan ayaa la soo warinayaa inuu ku dhowaaday inuu ku biiro kooxda Real Madrid sanadkii hore, waxaana heshiiskaas dib u dhigay dhaawac dhanka jilibka ah oo soo gaaray.
Sida uu warinayo Warsidaha Globoesporte, kooxda Man United ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa doonaysa inay la soo wareegto xiddigan reer Brazil, waxaana ay kala xaajoonaysaa Fluminense sida ugu macquulsan oo ay laacibkan ku keensan lahayd garoonka Old Traffrod, si uu uga ciyaaro xilli ciyaareedka 2019-2020 horyaalka Premier League.
Pedro, kaasoo sidoo kale la la xiriirinayo kooxda Inter Milan, Atalanta BC iyo Bordeaux ayaa loo magacaabay shaxda xulka qaranka Brazil bishii Agoosto 2018-kii, laakiin waxaa lagu qasbay inuu dhaawac uga baxo.
“Waan ku fiicnaan karaa kooxda Chelsea sida Eden Hazard oo kale” - Christian Pulisic
Atletico Madrid oo kooxaha Liverpool iyo Chelsea kula dagaalamaysa saxiixa David Neres